Filimsameeye Karan Johar Oo Noqday Shaqsigii Ugu Horreeyeye Ee Bollywood Ah Ee Lagu Casuumo Shirka Sannadlaha Ah WEF | Filimside.com – Wararkii Ugu Dambeeyay Aflaanta Hindiga	Monday, February 20th, 2017	HOME
Filimsameeye Karan Johar Oo Noqday Shaqsigii Ugu Horreeyeye Ee Bollywood Ah Ee Lagu Casuumo Shirka Sannadlaha Ah WEF
Sannadkaan ayaa waxaa markale la qaban doonaa shirka World Economic Forum (WEF), filimsameeye Karan Johar oo ah shaqsi si weyn looga yaqaano shirkadda aflaanta dalka India ee Bollywood Industry ayaana wuxuu noqday shaqsigii ugu horreeyey ee ka xamaasha shirkaddaan ee lagu casuumo shirkaan.
KJo waa nin aad u mashquul badan, sababtoo ah waa maalgeliye dhanka aflaanta ah, sidoo kale waa agaasime dhanka aflaanta ah, intaas waxaa sii dheer inuu yahay daadihiyaha barnaamijka Koffee With Karan.
Si kastaba ha ahaatee, Ururka World Economic Forum ayaa waxay Karan sannadkaan ku casuumeen shirkooda ka dhici doona magaalada Davos-Klosters ee dalka Switzerland, laakiin looma casuumin inuu yahay shaqsi caanka ah Bollywood, waa waxaa lagu qaatay derejada inuu yahay hogaamiye dhaqameed.
Shirkaani wuxuu bilaaban doonaa 17ka bishaan January iyadoo lasoo afjari doono 20ka bishaan January. Sharaf ayeyna u tahay Kjo inuu noqday shaqsigii ugu horreeyey ee ka shaqeeya Bollywood ee lagu casuumo shirkaan World Economic Forum.
Karan oo ka hadlayey casuumaadda uu helay ayaana yiri: “Sharaf ayey ii tahay in la igu casuumay shirka World Economic Forum, anigoo la mid ah hogaamiyeyaasha dhaqanka ee halkaas tegi doona isla markaana dalkeyga matalaya.”
Waxaa Aqrisay Warbixintaan (290)